အဖုံးပေးသွင်းသူနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Latex ခေါင်းအုံး | Rayson
Rayson Rayson စက်မှုဇုန်၊ Huasha လမ်း၊ Shishan၊ Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China ။ အဓိကထုတ်ကုန်များ Latex ခေါင်းအဖုံးသည်အဖုံးပေးသွင်းသူနှင့်အတူ
ထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသည့် R အားဖြင့်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်
&: D အဖွဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်မီစေရန်သို့မဟုတ်စံချိန်စံညွှန်းမီစံချိန်စံညွှန်းမီအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းလိုက်နာသည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိဖောက်သည်များအတွက် ၀ ယ်ယူပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ယခုအချိန်အထိ Rayson သည်နိုင်ငံတကာ၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်အပါအဝင်ထုတ်ကုန်အားလုံး ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့ရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းနှင့်ပို့ဆောင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပျက်စီးမှုမရှိနိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်ခေါ်ဆိုရန်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။
နမူနာအချို့ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း our သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတည်ပြုပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားနမူနာကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးပို့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာကိုရက် ၁၅ မှ ၂၀ အတွင်းအပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှနမူနာကောက်ယူရန်အမြန်ကုမ္ပဏီအားတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အား DHL, FedEx သို့မဟုတ် UPS အကောင့်နံပါတ်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ နမူနာကိုသင်၏အကောင့်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးပြုရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်လိုဂို? ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီမွေ့ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်ကုန်ပစ္စည်းအနုပညာသို့မဟုတ်လိုဂိုဓာတ်ပုံများပေးရန်သင့်အားလိုအပ်ရုံမျှသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သိုလှောင်ထားသောမွေ့ရာများကိုမည်သို့ဖြုတ်ရမည်နည်း။ ၁။ သင်၏အိပ်ခန်းအတွင်းရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့သေတ္တာကိုထည့်ပြီးမွေ့ရာများကိုဆွဲထုတ်ပြီးအိပ်ရာပေါ်တင်လိုက်ပါ။ ၂။ အတွင်းရှိပလတ်စတစ်ကိုမဖုံးရန်နှင့်မွေ့ရာများမပါစေရန်အပြင်ဘက်အိတ်ကိုကတ်ပြားများကိုသတိနှင့်ဖြတ်။ ဓါးမတောင်းပါနှင့်။ ၃။ လေဟာနယ်ချထားသောမွေ့ရာကိုအိပ်ရာပေါ်သို့တင်ပါ ၄။ လက်ပတ်နာရီကိုပလတ်စတစ်အိတ်အားသေချာစွာဖြတ်တောက်ပါ၊ မွေ့ရာသည်ချက်ချင်း decompress မှစတင်ကာပလပ်စတစ်အိတ်အားဖယ်ရှားပါ။ 5. သင့်မွေ့ယာအသစ်ကိုအပြည့်အဝချဲ့ထွင်ရန် ၂၄ နာရီခွင့်ပြုပါ။